Miyuu Beagles Pocket dhab yahay oo mid ma u baahan tahay? - Taranka
Miyuu Beagles Pocket dhab yahay oo mid ma u baahan tahay?
Olde English Pocket Beagles waa meelna uga yaraa sidii awoowayaashood . Laakiin, iyagu yihiin way ka yar yihiin walaalahooda Beagle ee caadiga ah waana la laban laaban yahay.
La kulan Gorgorka jeebka
Soo ogow jinsiga mar uun ku soo jiitay maxkamadaha boqortooyada Ingiriiska cabirkooda iyo shakhsiyaddooda weyn. Akhriso si aad wax badan uga ogaato noocaan xiisaha badan!
Taariikhda dheer ee Gorgorka Yar
Beagles Pocket-ka miyey u egyihiin wax ka duwan kuwa gorgorka caadiga ah?
Dabeecadda: Pocket Beagles ma xayawaan wanaagsan baa?
Daryeelkaaga Yar Yar ee Gorgorka
Baagagga jeebku maaha kuwo jilicsan sida aad u maleyn karto
Ha ku helin Gorgor Pocket on Impulse
Marka, Poag Beagles, ma inaad mid heshaa?
Asalka asal ahaan kooxdan ay jecel yihiin boqortooyada ma cadda. Waxay ahaayeen maxkamad laga jecelyahay 1300s-1600s. Boqoradda Elizabeth waxay u oggolaan jirtay Pocket Beagles martida ku martiqaad miiska cuntada .
Waxaa lagu naanaysi jiray ‘Glove Beagles’ maxaa yeelay waxay ku habboon yihiin galoof ugaarsi ah. Boqoraddu sidoo kale waxay ugu magac dartay ‘ Gorgor Gabay '.
Markii ugaarsiga dawacadu uu caan noqday, noocii ayaa ka dhacay wanaaggii. Kaliya dhererkoodu yahay 9 inji, ma weyneyn in ay ku biiraan ugaarsiga. Tani waxay u horseeday beeralayda inay ku hayaan ugaarsiga bakayle.
Waxay sidoo kale soo saareen taranka si ay u weynaadaan uguna dhakhsa badan ugaarsiga dawacooyinka.
Taasi waa sida Teacup Beagle uu u dabar go'ay. Laakiin taasi kama hor istaagin inay kuwa iskudaya ay isku dayaan inay dib u abuuraan.
Maya! Poag Beagles waxay u egyihiin si isku mid ah, marka laga reebo kuwa yaryar. Marka, waad filan kartaa isla dhagaha jilicsan ee jilicsan iyo indhaha diirran ee bunni ah . Laakiin waxaa jira fursad yar oo lagu heli karo Gorgor yar oo leh hal indhood oo buluug ah.
Gorgor guud ahaan waxay leeyihiin sanooyin laba jibbaaran oo madow (kuwaas oo casaan dhalashadooda ah!) oo leh af iyo xoog leh af iyo jibbaar. Ahaanshaha hounddog, waxay leeyihiin dhismo jilicsan oo murqo leh.
Intee ayuu le'eg yahay jeebka Pocket-ka ee buuxa?
Sida laga soo xigtay heerka caadiga ah , Beagles waxay ku yimaadaan laba qiyaasood waxaadna ka wada heli kartaa isla qashinka!
La kulan Boise, Gorgorka yar - Isha sawirka
Kala duwanaanta yar ma dhaafi doono dherer dhan 13 inji (33 cm) culeyskiisuna waa 22 ilaa 30 rodol (10 ilaa 14 kg).
Baagagga cabiran waxay leeyihiin dherer dhan 13 ilaa 15 inji (33 ilaa 38 cm) garabka waana inaysan miisaankiisu ka badnayn 35 rodol (16 kg).
Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) uma aqoonsana Pocket ama Miniature Beagles inay tahay isirkeeda.
Iyaga ayaa ka diiwaangashan ama loo tixgeliyaa inay yihiin nooca yar ee heerka 'Beagle'.
Qaar ka mid ah kuwa wax soosaara ayaa wali isku dayaya inay ilaaliyaan cabirka Mini Beagles oo ah 7 ilaa 12 inji (18 ilaa 30.5 cm) culeyskooduna yahay 7 ilaa 15 rodol (3 ilaa 7 kg).
Waxaad u isticmaali kartaa shaxda miisaanka si aad u raad koritaankaaga Pocket Beagle maadaama aysan u kori doonin sida aan fileyno. Guud ahaan, waa inay u egtahay sidan:
Da '(bilo) Miisaanka (rodol)
3 3.5 - 6 rodol
9 13 - 18 rodol
12 15 - 18 rodol
Iyada oo ku saleysan miiskan, Beagle Pocket waxaa loo tixgeliyaa inuu si buuxda u koray markii ay jiraan 1 illaa 1 ½ sano jir. Markey gaaraan da'da 8 bilood , waa inaad awood u yeelatid inaad hesho fikradda ah intay weynaan doonaan.
Cabirkooda awgiis, waxay ku joogi karaan guri dabaq ah, haddii ay fursad u leeyihiin inay banaanka u baxaan badanaa. Iyada oo ay taasi jirto, deegaanka ugu wanaagsan ayaa ah guri leh deyr .
Koodhka & midabka Jeebka jeebka
La kulan Eyga yaryar ee 'Pocket Beagle' - Isha sawirka
Waxay sidoo kale ku yimaadaan midabbo tiro badan: Midabada Madoow iyo Tan ama Libaaxyada Libaaxyada ayaa ugu badan uguna baahsan.
Waxay kaloo noqon karaan shabaqa , buluug , liin dhanaan , cag , ama saddex midab leh , laakiin midab kasta oo dabacsan waa la aqbali karaa.
Waa inay haystaan ​​koorsada, laakiin dhibcaha Irishku ma ahan wax aan caadi ahayn. Caadi ahaan waxay leeyihiin dabo caarad cad, ka dibna lugaha iyo caloosha ayaa had iyo jeer cadaan ah.
Haa, waa yihiin. Beagles wuxuu si gaar ah ugu fiican yahay xubnaha qoyska, siiba caruurta . Laakiin cabirkooda jilicsan awgood, waqtiga ciyaarta ee carruurta waa in lala socdaa.
Laguguma talinayo inaad uga tagto Toy Beagle cunug si looga fogaado shilalka. Dogagyadan yaryar waa in si tartiib ah loola dhaqmaa, ama waxay yeelan karaan af.
Taas ka sokow, waxay leeyihiin naf jilicsan oo si fudud u jecel madadaalo waxayna u baahan yihiin wehel u dhigmi kara farxaddooda nolosha.
Poag Beagles ma cabaadaan, way baaba’ayaan
Tani way dhib noqon kartaa markaad maqasho markii ugu horeysay. Laakiin Beagles baay markay kacaan.
Way adag tahay in la sharaxo sida ay u egtahay, laakiin halkan waxaa ah fiidiyow laga soo duubay Paddles, shaashad yar oo buluug ah oo loo yaqaan 'Beagle', oo ka reebaysa xiisaha:
Bahal gorgorku waa mid dhawaaq leh isla markaana isku muujin doona codkiisa. Waad filan kartaa qaylo, oohin, xiiq.
Nooc macaan oo leh dabeecad wanaagsan, waad ka filan kartaa isaga si fiican ula dhaqan qof walba . Oo isna wuxuu samayn doonaa cayn kasta oo buuq ah si uu kuu hubiyo ogow wuu ku jecel yahay!
Teacup Beagles kuma baahnid adiga 24/7
Poag Beagles xoogaa way ka madax banaan yihiin, ilaa iyo inta ay jiraan wax iyaga u gaara inay qabtaan, way fiicnaan doonaan. Laakiin maskaxda ku hay taas eey caajiso waa xayawaan cidlo ah oo wax baabi'iya .
Haddii aadan waqti badan la qaadan karin isaga, ka feker inaad saaxiib la noqoto. Macno malahan hadey tahay eey kale ama bisad. Waxa ay rabaan waa wehel ama kicin.
La kulan buskud, Beagle-ka Teacup - Isha sawirka
Guri jabinta guriga waa mid adag, laakiin waa kuwo caqli badan
Noocyada yaryar guud ahaan waa kuwo caqabad ku ah burburka guriga, qashinkanina kama duwana. Waxay ku qaadan karaan ilaa hal sano housetrain. Sidaas darteed, damqasho fido-gaagu waa fiican yahay.
Caqligooda darteed, Toy Beagles-kan u baahan tababarka adeeca. Baagaga jeebka noqon karaa mid madax adag tababar la'aan ama anshax la'aan. Hadaad ula dhaqanto si adag, way kula jaanqaadayaan.
Waxay sameyn doonaan wax kasta oo cuntada ah, sidaa darteed xoojinta wanaagsan waxay la shaqeyn doontaa waxyaabo yaab leh. Ka taxaddar markaad quudineyso daweynta. Fadlan ha siin buskud ama daaweyn dhan. Taabadalkeed, u kala qaad qaybo yaryar maadaama jeebkaaga Beagle aanu wax badan u baahan doonin.
Eeyaha yaryar ayaa lagu yaqaanay inay yihiin oo ay qaadeen shimbiraha ugaadha . Maaddaama Teacup Beagles ay aad u yar yihiin, waa inaad ku haysataa gudaha. Tani waxay ka ilaalin doontaa hanjabaadaha iyo cimilada labadaba.
Waxay si dhaqso ah u lumiyaan kuleylka, markaa haddii aad soo bixisid xilliga jiilaalka, hubi inay saaran yihiin jaakad.
Beagleskan 'Pocket Beagles' waa dayactir hooseeya laakiin waxaad u baahan doontaa inaad waqti yar oo caddaalad ah la qaadato iyaga. Waxay u baahan yihiin jimicsi iyo dulqaad badan markay tahay tababarka.
Jimicsiga jeebkaaga Beagle maahan socod jardiinada
Poag Beagles way yaraan kartaa, laakiin way u baahan yihiin saacad jimicsi maalin kasta . Laakiin waxaad u baahan tahay inaad sugto illaa inta ay yihiin 18 bilood ama ka weyn . Bilaabidda jimicsi joogto ah oo aad u yar waxay u horseedi kartaa dhaawac wadajir ah.
Cabirkooda oo aad u yar awgood, waxaa suurtagal ah in jimicsi xad dhaaf ah la sameeyo. Haddii aad qorsheyneyso inaad u keento trekking, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad maal gashato boorsada eyga ama side . Sidan ayaad ku xoqi kartaa ilmahaaga dhogorta leh markuu daalana.
Waxay jecel yihiin inay is dhex yaacaan oo ay si xor ah u warwareegaan, markaa ha ka fileynin inay si deggan u ag socdaan. Yar yar ee Teacup Beagle ayaa wax walba siin doona ur wanaagsan.
Waxa laga yaabaa inuu xitaa eryanayo urta. Waa dhaqan fiican inaad ku sii hay xadhig ilaa aad ku jirto xayndaabka albaabka .
Waxay helayaan nasasho badan markay bislaadaan, markaa ha la yaabin markii uu bilaabo inuu xirmo miisaanka. Si looga hortago inay taasi dhacdo, hubi inay helaan jimicsigooda!
La kulan Carlos, Gorgorka yar - Isha sawirka
Arooska: Miyuu jeebbada jeebku wax badan daadiyaa?
Inbadan waxay leeyihiin fikrad qaldan in Beagles uu yahay mid ded-gaaban, laakiin runtu waxay tahay in jubbadooodu dherer dhexdhexaad ah yihiin. Waxay daadiyaan sanadka oo dhan, oo ay ugu muuqato gu'ga. Intaas markuu yidhi, Pocket Beagle ma aha eeyga hypoallergenic waana la tixgeliyaa daadiyayaal dhexdhexaad ah .
Dharkooda cufan ayaa u adkaysata roobka u baahan lahaa cadayasho todobaadle ah . KU gacmo gashi waa qalab weyn oo looga saaro timaha dhintay. Tani waxay siin doontaa jeebkaaga Beagle jaakad dhalaalaysa oo caafimaad qabta.
Sida Beagles oo dhan, waa la dhaqi karaa labadii ilaa lixdii biloodba , ama markii loo baahdo, shaambo fudud. Markaad maydhanayso xayawaankaaga guriga, taxaddar dheeri ah ka samee si aad uga fogaato biyaha dhagaha. Dhagahooda dhago-xumaaday waxay u muuqdaan kuwo si fudud ugu dhaca caabuqyada dhegaha.
Hubso inaad fiiriso dhagahooda laba jeer usbuucii si aad u ilaaliso nadaafadda.
Ciddiyahooda sidoo kale waa in si joogto ah loo hubiyaa oo la jarjaraa hal jeer 6-8 usbuuc kasta.
Quful cuntada meel fog maxaa yeelay toy-ka Beagle ayaa urinaya cunnada fudud ee ay jecel yihiin
Gorgorrada waxaa lagu yaqaan inay yihiin chowhounds oo waxaad cuni doontaa wax badan oo aad u oggolaato iyo wax ka badan. Waxay heli karaan difaac waxayna ku buuxsami karaan cuntada. Isku day inaadan carqaladeynin intuu wax cunayo. Way ku caawin kartaa adiga oo dhigaya baaqulikiisa meel xasilloon. Sidoo kale, ha ku kaftamin cuntada!
La kulan Biscuit, the toy Beagle - Isha sawirka
Waxay u baahan yihiin in lagu quudiyo hadba heerka waxqabadkooda iyo da'da. Sii 1 koob oo ah eey tayo sare leh maalin kasta oo tan u kala saar laba ama saddex cunto . Kibbo yaryar waxaa laga door bidaa daamanka yar yar awgood, hana iloobin inaad lacag ka bixiso daaweyntooda.
Celceliska cimriga Toy Beagle waa inta udhaxeysa 12 ilaa 15 sano. Laakiin ma ogtahay taas mid ka mid ah eeyaha ugu da'da weyn waligaa noolaa runti wuxuu ahaa Beagle la yiraahdo Butch oo ku riyaaqay cimri dhan 27 sano!
Maal gasho a tartiib tartiib ah si aysan cimaamado uga dhigin cuntadooda, taasoo u horseedi karta dhibaatooyin caafimaad.
Xusuusnow: haddii aadan arkin dhexda, way cayilan yihiin. Waxaad u baahan doontaa inaad si adag u xakameyso qeybihiisa oo aad ku dhegto jimicsiga.
Maaddaama ay aad u yar yihiin, beagles jeebku ma leeyihiin arrimo caafimaad?
Noocani wuxuu u janjeeraa indhaha cherry (halka qanjidhada indhaha baalalka ka soo bararaan). Waxay sidoo kale qaadi karaan glaucoma, cataracts, retinal dysplasia, retinal atrophy - dhammaantood waxay u horseedi karaan indho la'aan. Indho qallalan iyo Distichiasis sidoo kale waa waxyaabo ay tahay in laga feejignaado.
Jeebka 'Pocket Beagles', gaar ahaan, waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco xubno aan horumarin iyo fawdo. Cudurka 'puppy Syndrome' sidoo kale waxaa badanaa la xiriirta Pocket Beagles. Sababta Sababtoo ah qashin qubka ayaa badiyaa soo bandhiga. Xaaladani waxay sababi kartaa naafonimo socodka laakiin eeydu way ka weynaan kartaa.
Waxay sidoo kale ku dhici karaan hypothyroidism. Tani waa arrin la xiriirta qanjirka 'thyroid' oo sababi kara culeys iyo dhibaatooyin xagga taranka ah iyo sameysankooda jaakad u egtahay liidata .
Arrimaha kale ee saamaynta ku yeelan kara Beagles waa Canine Hip Dysplasia, Chinese Beagle Syndrome, Cryptorchidism, Cleft Lip ama Palate, Epilepsy, Epiphyseal Dysplasia, Hermaphroditism, Hypoglycemia, Intervertebral Disc Disease and Patellar Luxation.
Waan helnay, iyagu waa kuwo aad u qurux badan, laakiin xayawaanku waa ballanqaad nololeed oo dhan. Haddii aadan awoodin inaad si sax ah u daryeesho, way dhici karaan gaba gabada hoyga .
Qiimaha jeebka Beagles wuu socon karaa ilaa $ 2,500 iyo ugu hooseeya $ 500 , iyadoo kuxiran meesha aad kahesho. Had iyo jeer ku adkeyso inaad aragto waalidiinta haddii aad wax ka iibsaneyso abuure. Haddii waalidku u muuqdaan kuwo aan caafimaad qabin, u tag qof kale.
Qaddarkooda qashinku wuu weynaan karaa - ilaa 14 eey . Celceliska qashinka waa kala badh cabirkaas, laakiin mararka qaarkood waxaa jira kaliya 2 qashin qashin ah.
Waqti Qaado Raadinta Saxeexa Xaqqa ah
Markii aad wax iibsaneysid, waa inaad had iyo jeer wax ka iibsataa abuure mas'uul ah. Waxaad ka heli kartaa adoo ka helaya talosiinta saaxiib ama naadiyada aqallada.
Hubso inaad fahantay sida ay u dhaleen eeyohooda oo ay doortaan midka adiga kugu habboon.
Teacup Beagles waxaa lagu gaaraa:
Isku dayga ah inay eeyahooda ka dhigaan kuwo yaryar, kuwa sameeya ayaa laga yaabaa inay u soo baxaan Beagle cabbirkoodu dhan yahay 'Daschund'. Crossbreeds waxay umuuqan karaan Teacup Beagles markay yihiin eeyo. Laakiin, waxaa laga yaabaa inay ku koraan inay yeeshaan sanno dheeri ah, jaakado dhaadheer ama dhego aan hoos loo dhigin.
Gorgorrada leh ciriiriga ayaa wadajir loo soo saaray si loo abuuro Mini Beagles. Beagles-kan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin addimo jilicsan, dhibaatooyinka wadajirka ah iyo cilladaha laf-dhabarka.
Qaadashada cunugga ugu yar, kan ugu liita uguna tarma runt kale. Dhaqankani wuxuu abuuraa Beagles Pocket yar yar oo aan caafimaad qabin.
Taranka xulashada laba eey oo xiriir la leh ayaa ah wax AKC raali ka yahay. Tan waxaa loo sameeyaa si loo ilaaliyo daaweyn la jecel yahay, laakiin tani way sababi kartaa dhaawaca hidde .
Olde English Beagle Breeders waa inay ka fekeraan caafimaadkooda
Way adkaan kartaa in la helo breed sumcad leh oo u heellan hagaajinta taranka maxaa yeelay dad badan ayaa ku samee lacagta iyo ka faa'iideyso cabirka macallinka . Mararka qaarkood soosaarayaasha ayaa dhaafi jiray eeyahooda si ay u yareeyaan.
Haddii aad wax ka iibsato dhaqan-bixiye aan anshax lahayn, waxaad lahaan doontaa cunug bukta.
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ka digtoonaato xayeysiinta been abuurka ah ama xeeladaha suuqgeynta. Pixie Beagles ayaa la sheegay inay tahay nooc yar oo ka mid ah jeebabka 'Pocket Beagles', laakiin ma jiraan wax lagu taageerayo sheegashadan. Ma jiro wax soosaara oo xaqiijin kara cabbirka qaangaarka eey yar oo aan la socon koritaankooda.
Soosaarayaasha sumcadda leh ayaa gacanta ku hayn doona waraaqaha waalidkood. Buulku waa inuu sidoo kale nadiif ahaadaa, eeyguna ay faraxsan yihiin. Ha la yaabin markii aad ku qoran tahay liiska sugitaanka. Caadi ahaan, kaliya kuwa guryaha ku shaqeeya waxay yeelan doontaa ilmo yaryar oo joogto ah.
Waa kuwan dhowr caanood oo caan ah:
Boqoradda Elizabeth Pocket Beagles (Collegedale, TN)
Scarlett’s Old English Pocket Beagles (Walworth, NY)
Poag Beagles USA (Dallas, TX)
Badbaadinta Gorgorlada 'Pocket Beagles' iyo nolol wanaagsan
Ku habboon kuwa leh miisaaniyad yar ama doonaya inay siiyaan eey kale fursad labaad.
Eeyaha waaweyn ama kuwa waaweyn ayaa fiican - waxaad heli doontaa taariikhdooda caafimaad oo dhameystiran lagamana qaadi doono lama filaan.
Mararka qaarkood, waxaad heli doontaa eeyo yar yar oo ay korsadaan. Qaar badan oo kuwaas ka mid ahi waxay ka yimaadaan milkiileyaasha aan garaneyn sida ugu habboon ee ay u tababaraan. Waxaad u baahan kartaa ilo badan iyo waqti aad ku dhaqanceliso.
Haddii aad dooratid inaad samatabbixiso, adiga ayaa wanaagsan! Waa kuwan badbaado yar oo aad tixgelin karto:
Samatabbixin Hound (Austin, TX)
Beagles R Us (London, OH)
Baaskiilada SOS (TN / GA / AL)
Saaxiib baaxad weyn oo loogu talagalay dhalinyarada iyo waayeelka. Qosolkooda qurxoon ayaa ku madadaalin doona saacado.
La kulan Jeter, Mini Beagle - Isha sawirka
Laakiin sidoo kale waxay ka careysiin kartaa deriskaaga. Haddii aad u baahan tahay eey aamusan, waxaan soo jeedin lahayn kuwa yar Cavachon ama Basenji hound.
Inaad agagaarka ku haysatid Pixie Beagle waxay la mid tahay socod baradka guriga. Waxaad u baahan doontaa inaad xayawaankaaga u caddeyso gurigaaga oo aad hubiso inaysan jirin wax cunto ah (ama alaabta carruurtu ku ciyaarto) oo jiifa.
Taas ka sokow, waxaad u baahan doontaa inaad diyaar u ahaato inaad waqti badan ku qaadato tababarka iyo la ciyaarista eygaaga. Laakiin wuxuu kugu abaalmarin doonaa jacayl badan iyo daacadnimo.
Ma heli lahayd Gorgor Pocket ah? Sababta ama sababta? Noo soo sheeg faallooyinka.
Aussiedor: Miyuu adiga kugu habboon yahay sheybaarka Shepherd Lab ee Australiyaanka ah Adigu Adigu Adigay kuu habboon tahay?
Tilmaamaha Poodle Bichon oo dhameystiran: 5 Waa inuu Aqriyaa Xaqiiqooyinka
Magacyo qurxoon oo loogu talagalay eeyaha yaryar
suunka saarista eey
muxuu eygaygu u qallali jiray oo u gariirayaa
maxay eeyaha indhahaaga leefleefi karaan
sideen u sheegi karaa nooca eey aan haysto